नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनको चुनाव, प्रदेश नं. ६ बाट युवा इन्जिनियरको बाहुल्यता – Enayanepal.com
नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनको चुनाव, प्रदेश नं. ६ बाट युवा इन्जिनियरको बाहुल्यता
२०७३, २५ भाद्र शनिबार मा प्रकाशित
सुर्खेत, भदौ २५। यही भदौ ३१ गते हुने नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनको ३१ औं कार्यकारिणिसभाको चुनावमा प्रदेश नं. ६ बाट पनि उम्मेदवारी पर्ने निश्चित भएको छ ।
चुनाव अगावैै उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा यस प्रदेशबाट पनि इन्जिनियरहरुले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । कार्यकारिणी सभाको चुनावमा प्रदेश नं ६ बाट उम्मेदवारी दिनेहरुमा युवाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरुमा यो प्रदेशबाट विभिन्न दुईवठा प्यानलका उम्मेदवार रहेका छन् । ती द्बै प्यानलमा युवा इन्जिनियरहरु रहेका छन् ।
नेपाली काँगेस निकट लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उमेश थानी माहसचिबमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यस्तै पवन रूपाखेती पनि नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत भएका छन । नेपाल राष्ट्रिय ईन्जिनियरिङ संगठनकातर्फबाट प्रगतिशिल प्यानलका रुपमा नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद सदस्यको पदमा उम्मेदवारी दिएका पवन रुपाखेती युवा मध्येका पनि लोकप्रीय उम्मेदवार हुनु । यसैगरी यही प्यानलबाट सल्यानका बिजय बिष्ट , सुर्खेतका सोना लाल यादव पनि उम्मेदवार कजेमन छन् । यादव र विष्ट पनि युवा लोकप्रीय इन्जिनियरहरु हुन् ।
यस्तै इन्जिनियर रबि वी.सी. प्रगतिशीलबाट नेपाल ईन्जिनियरिङ एशोसियसनको कार्यकारिणीको चुनाव को सद्स्यका उम्मेदवार बनेका छन । उनी पनि युवा उम्मेदवार हुन । नेपाल राष्ट्रिय ईन्जिनियरिङ संगठनकातर्फबाट घोषणा गरिएको प्रगतिशिल प्यानलबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका इन्जिनियरहरु अरु भन्दा युवा र लोकप्रीय देखिएका छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियशनको निर्वाचन हरेक २÷२ वर्षमा भएता पनि इन्जिनियरिङ एसोसिएशनबाट पॉच जना उम्मेदवार भने हरेक ४ बर्षका लागि निर्वाचन मार्फत ईन्जिनियरिङ परिषदको लागि सद्स्य निर्वाचित भएर जाने प्रचलन रहेको छ । यी दुई निर्वाचन यसपटक संगै हुन लागेका छन् । परिषद्मा सदस्य निर्वाचित हुनेको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ भने एसोशियशनका लागि निर्वाचित हुनेको २ वर्षको मात्रै हुने छ ।
यस अघि पाँच विकास क्षेत्र हुँदा बाँकेको नेपाल गञ्जमा निर्वाचन उपकेन्द्र हुने गरेकोमा अहिले प्रदेश संरचना अनुसार एउटा केन्द्र सुर्खेतमा रहने भएको छ ।